Dota2 ရဲ့ Feature တစ်ခု ဖြုတ်လိုက်ပြီးမှ ကစားသမားတွေတောင်းဆိုလို့ ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ရတဲ့ Valve – Gaming Noodle
Dota 2: ဂိမ်းထဲက မလိုတာတွေ ဖြုတ်ပစ်မယ်!
ကစားသမားများ: ပြန်ထည့်ပေးပါ၊ ပြန်ထည့်ပေးပါ!
Dota 2: အင်းပါ ပြန်ထည့်လိုက်ပြီနော်! :'(
TI9 ပြိုင်ပွဲကြီး ကျင်းပတော့မယ့် ယခု သြဂုတ်လ အစမှာ Valve ဟာ Dota2update တစ်ခုကို ထုတ်ခဲ့ပြီး ဂိမ်းရဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်တဲ့ optional unit query panel ကို ဖြုတ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ Update အသစ်ထဲမှာ အဲဒီ feature ကို ဖြုတ်တာက လွဲရင် တခြားဘာမှ မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။
Optional unit query panel ဟာ အသုံးပြုသူကို ကိုယ် ကိုင်တွယ်ကစားနေတဲ့ hero ကို မပြောင်းမလဲ အသေထားပြီး အခြားအရာများကို ထောက်ကြည့်လို့ ရအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ထောက်ကြည့်ခံရတဲ့ unit ရဲ့ အချက်အလက်တွေဟာ screen ရဲ့ ညာဘက်ဘေးမှာ pop up တစ်ခုပုံစံနဲ့ ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Alternative UI လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။
ဒီ panel ဟာ Heroes of Newerth ဂိမ်းထဲမှာလည်း ပါဝင်ပြီး အဲဒီဂိမ်းကနေ Dota2ကို ပြောင်းလဲကစားကြတဲ့ ကစားသမားများအတွက် အသားကျ အဆင်ပြေအောင် ထည့်ထားပေးခဲ့တာပါ။ ဒီလို ထည့်ပေးခဲ့တဲ့ အတွက် Valve ဟာ bug များစွာကို ဖြေရှင်းခဲ့ရပါတယ်။ Backpack များ အသစ်ထည့်သွင်းချိန်နဲ့ teleport scroll slot ကိုပါ သပ်သပ်ထည့်သွင်းခဲ့ချိန်တွေမှာ panel ဟာ မှန်မှန်ကန်ကန်ပြသခြင်း မရှိခဲ့လို့ ပြဿနာများစွာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
Alternative UI Feature
“Bug များကို ပြင်ဆင်ကြည့်ပြီးနောက် ဒီ feature ဟာ ကစားသမားအများစု အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် design ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ဖို့ ကြီးကြီးမားမား လိုအပ်တယ်လို့ ခံစားလာမိပါတယ်။ စ ထည့်သွင်းပြီးထဲက ဒီ feature ကို အသုံးပြုတဲ့သူဟာ ကစားသမားအားလုံးရဲ့ ၁၀၀ ပုံ ၁ ပုံ ပဲရှိတယ်” လို့ update မှာ ရေးသားပြီး ဖြုတ်ထုတ်ခဲ့တာပါ။ Heroes of Newerth ကနေ ပြောင်းလာကြတဲ့ professional ကစားသမားတွေအတွက် အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
“ကျေးဇူးပြုပြီး alternative UI ကို ပြန်ထည့်ပေးပါဗျာ။ ကျွန်တော်ရော Taiga ပါ Dota2စ ကစားထဲက အဲဒီအတိုင်းကစားလာခဲ့တာပါ။ TI9 ရောက်ဖို့ ၂ ပတ်ပဲ လိုမှ ဒါကိုဖြုတ်ချလိုက်လို့ ဒုက္ခရောက်နေရပါပြီ။ အနည်းဆုံးတော့ ပြိုင်ပွဲပြီးတဲ့အထိ ထားပေးပါ။ ” လို့ Alliance အသင်းရဲ့ကစားသမား Boxi က Twitter ကနေ တောင်းဆိုရေးသားခဲ့သလို အခြားကစားသမားများကလည်း အသီးသီးတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
အဆိုပါ အပြောင်းအလဲနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး Royal Never Give Up (RNG) အသင်းက “LaNm” နဲ့ “Monet” တို့ကလည်း Weibo မှတဆင့် ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။
တောင်းဆိုမှုများကို Valve ဟာ လျစ်လျူမရှုခဲ့ပဲ alternative UI ကို မကြာသေးမီ ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲ အလျင်အမြန် ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ အပြောင်းအလဲ ပြန်လုပ်ပေးတဲ့အတွက် Boxi ကတော့ Dota2ကိုရော ဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုပေးကြတဲ့ ကစားသမားများကိုပါ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ထပ်မံရေးသား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Boxi thanks to Valve
ယခုဆိုရင် ကစားသမားများအတွက် ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲမှု မရှိတော့ပဲ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် TI9 ကို စိတ်ချလက်ချ ဝင်ပြိုင်နိုင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ ကစားသမားများရဲ့ တောင်းဆိုမှုကို အလေးထားခဲ့တဲ့ Valve ဟာလည်း community ထဲမှာ ပိုပြီး ကောင်းသတင်းရခဲ့ပါတော့တယ်။ Dota2သတင်းနဲ့ အခြားသော esport သတင်းများကို Gaming Noodle မှအမြဲမပြတ် တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
Dota2 ရဲ့ Feature တဈခု ဖွုတျလိုကျပွီးမှ ကစားသမားတှတေောငျးဆိုလို့ ပွနျထညျ့ပေးလိုကျရတဲ့ Valve
Dota 2: ဂိမျးထဲက မလိုတာတှေ ဖွုတျပဈမယျ!
ကစားသမားမြား: ပွနျထညျ့ပေးပါ၊ ပွနျထညျ့ပေးပါ!
Dota 2: အငျးပါ ပွနျထညျ့လိုကျပွီနျော! :'(
TI9 ပွိုငျပှဲကွီး ကငျြးပတော့မယျ့ ယခု သွဂုတျလ အစမှာ Valve ဟာ Dota2update တဈခုကို ထုတျခဲ့ပွီး ဂိမျးရဲ့ feature တဈခုဖွဈတဲ့ optional unit query panel ကို ဖွုတျထုတျခဲ့ပါတယျ။ Update အသဈထဲမှာ အဲဒီ feature ကို ဖွုတျတာက လှဲရငျ တခွားဘာမှ မပါဝငျခဲ့ပါဘူး။
Optional unit query panel ဟာ အသုံးပွုသူကို ကိုယျ ကိုငျတှယျကစားနတေဲ့ hero ကို မပွောငျးမလဲ အသထေားပွီး အခွားအရာမြားကို ထောကျကွညျ့လို့ ရအောငျ ကူညီပေးနိုငျပါတယျ။ ထောကျကွညျ့ခံရတဲ့ unit ရဲ့ အခကျြအလကျတှဟော screen ရဲ့ ညာဘကျဘေးမှာ pop up တဈခုပုံစံနဲ့ ပျေါလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ Alternative UI လို့လညျး ချေါပါတယျ။
ဒီ panel ဟာ Heroes of Newerth ဂိမျးထဲမှာလညျး ပါဝငျပွီး အဲဒီဂိမျးကနေ Dota2ကို ပွောငျးလဲကစားကွတဲ့ ကစားသမားမြားအတှကျ အသားကြ အဆငျပွအေောငျ ထညျ့ထားပေးခဲ့တာပါ။ ဒီလို ထညျ့ပေးခဲ့တဲ့ အတှကျ Valve ဟာ bug မြားစှာကို ဖွရှေငျးခဲ့ရပါတယျ။ Backpack မြား အသဈထညျ့သှငျးခြိနျနဲ့ teleport scroll slot ကိုပါ သပျသပျထညျ့သှငျးခဲ့ခြိနျတှမှော panel ဟာ မှနျမှနျကနျကနျပွသခွငျး မရှိခဲ့လို့ ပွဿနာမြားစှာ ရငျဆိုငျခဲ့ရပါတယျ။
“Bug မြားကို ပွငျဆငျကွညျ့ပွီးနောကျ ဒီ feature ဟာ ကစားသမားအမြားစု အသုံးပွုနိုငျဖို့အတှကျ design ပိုငျးဆိုငျရာ ပွုပွငျဖို့ ကွီးကွီးမားမား လိုအပျတယျလို့ ခံစားလာမိပါတယျ။ စ ထညျ့သှငျးပွီးထဲက ဒီ feature ကို အသုံးပွုတဲ့သူဟာ ကစားသမားအားလုံးရဲ့ ၁၀၀ ပုံ ၁ ပုံ ပဲရှိတယျ” လို့ update မှာ ရေးသားပွီး ဖွုတျထုတျခဲ့တာပါ။ Heroes of Newerth ကနေ ပွောငျးလာကွတဲ့ professional ကစားသမားတှအေတှကျ အခကျအခဲမြားဖွဈပျေါလာခဲ့ပါတယျ။
“ကြေးဇူးပွုပွီး alternative UI ကို ပွနျထညျ့ပေးပါဗြာ။ ကြှနျတျောရော Taiga ပါ Dota2စ ကစားထဲက အဲဒီအတိုငျးကစားလာခဲ့တာပါ။ TI9 ရောကျဖို့ ၂ ပတျပဲ လိုမှ ဒါကိုဖွုတျခလြိုကျလို့ ဒုက်ခရောကျနရေပါပွီ။ အနညျးဆုံးတော့ ပွိုငျပှဲပွီးတဲ့အထိ ထားပေးပါ။ ” လို့ Alliance အသငျးရဲ့ကစားသမား Boxi က Twitter ကနေ တောငျးဆိုရေးသားခဲ့သလို အခွားကစားသမားမြားကလညျး အသီးသီးတောငျးဆိုခဲ့ကွပါတယျ။
အဆိုပါ အပွောငျးအလဲနဲ့ ပါတျသကျပွီး Royal Never Give Up (RNG) အသငျးက “LaNm” နဲ့ “Monet” တို့ကလညျး Weibo မှတဆငျ့ ထုတျဖျော ပွောကွားခဲ့ကွပါတယျ။
တောငျးဆိုမှုမြားကို Valve ဟာ လဈြလြူမရှုခဲ့ပဲ alternative UI ကို မကွာသေးမီ ရကျပိုငျးအတှငျးကပဲ အလငျြအမွနျ ပွနျထညျ့ပေးလိုကျပါတော့တယျ။ အပွောငျးအလဲ ပွနျလုပျပေးတဲ့အတှကျ Boxi ကတော့ Dota2ကိုရော ဝိုငျးဝနျးတောငျးဆိုပေးကွတဲ့ ကစားသမားမြားကိုပါ ကြေးဇူးတငျကွောငျး ထပျမံရေးသား ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ယခုဆိုရငျ ကစားသမားမြားအတှကျ ထူးထူးခွားခွားပွောငျးလဲမှု မရှိတော့ပဲ သွဂုတျလ ၂၀ ရကျနမှေ့ာ ကငျြးပမယျ့ TI9 ကို စိတျခလြကျခြ ဝငျပွိုငျနိုငျကွမှာပဲဖွဈပါတော့တယျ။ ကစားသမားမြားရဲ့ တောငျးဆိုမှုကို အလေးထားခဲ့တဲ့ Valve ဟာလညျး community ထဲမှာ ပိုပွီး ကောငျးသတငျးရခဲ့ပါတော့တယျ။ Dota2သတငျးနဲ့ အခွားသော esport သတငျးမြားကို Gaming Noodle မှအမွဲမပွတျ တငျဆကျပေးလကျြရှိပါတယျ။